लेक लागेर पर्यटकको मृत्यु « Lokpath
२०७६, ३१ भाद्र मंगलवार २१:५३
प्रकाशित मिति : २०७६, ३१ भाद्र मंगलवार २१:५३
मेरापिक क्षेत्रमा लेक लागेर आज एक पर्यटकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिक ३३ वर्षीय गोविन्द लखमान रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमोरियाले जानकारी दिनुभयो ।
लेक लागेर बिरामी भई अलपत्र परेका सात विदेशी तथा एक नेपालीको उद्धार गरिएको छ । उनीहरुलाई हेलिकप्टरमा उद्धार गरी काठमाडौँ पठाइएको हो । केही दिनयता लगातार वर्षा हुँदा पर्यटकलाई समस्या भएको छ । निरन्तरको वर्षा र बाक्लो हुस्सुका कारण खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा आएका सयौँ पर्यटक लुक्ला आएर बसेका छन् ।
केही पर्यटक झण्डै डेढ घण्टा पैदल यात्रापछि सुर्के आएका छन् । उनीहरु हेलिकप्टरमा काठमाडाँै फर्किने तयारीमा छन् । आज बिहान चाँैरीखर्क र सुर्केबाट विदेशी तथा नेपाली यात्रु लिएर गएका १० हेलिकप्टरले काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा आकस्मिक अवतरण गरेका थिए । शुक्रबारदेखि मौसम प्रतिकूलका कारण खुम्बु क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
अनौठो मन्दिर जहाँको हावा, माटो र पानीबाट ठीक हुन्छ अनौठो रोग !
काठमाडौं । मन्दिरसँग जोडिएका रोचक कुराहरुको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ होला
जहाँका महिला जीवनभर मात्र एकपटक नुहाउँछन्, त्यो पनि आफ्नो विवाहमा !
काठमाडौं । अफ्रिकाको उत्तरपूर्वी नामिबियास्थित कुनेन प्रान्तमा बस्ने हिम्बा जनजातीका महिलाहरु आफ्नो जिवन
काठमाडौं । संसारमा रहेका बिभिन्न जेलमा फरक फरक किसिमका नियमहरु हुने गर्दछन् ।
काठमाडौं । भारतको फरिदपूरमा बस्ने एमबिए पढ्दै गरेका एक व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने प्रयाश